Diimaha – Page 15 – Kaasho Maanka
Madhici kartaa in quraanka qaab qaldan loo soo guuriyay?
Sooyaalka markii dib loogu laabto, quraanka in badan ayuu ka horreeyay naxwaha iyo qawaacidda afka carabta. Xiliyadii hore, dadkii degenaa magaalooyinka Makka iyo Madiina waxaa ay wax ku qori jireen geedo la qoray, maqaar iyo lafaha xoola aqoorka sida lafta ballaaran ee garabka geelka, sidoo kale, qoraalka farta carabiga ee xilligaas jirey waxuu ahaa qoraal aan dhibco iyo shaqal toona laheen...
Diintu ma u dhalashaa mise qanaaco?
Walaalkayga diimaha rumaysanow wali ma is weydiisay sababta aad urumeysantahay diinta aad haysato? Wali maku fikirtay maxey tahay sababta aad udooratay diintan aad darteed qudh u jari karto? Maxeey tahay sababta aad u aamintay in Ciisa Masiix uuyahay badbaadiyaha kaliya ee kaligiis wax badbaadin karo? Maxaad u aamintay in Allaaah uuyahay ilaaha kaliya ee xaqqa lugu caabudo maxamadna uu yahay...
Islaamku miyuu karaameeyey dumarka?
Gabadh u muslimadda oo difaacda Islaamka ayaa la hor dhigay waydiinta ku xusan cinwaanka qormadeena, waxayna ku bilowday hadalkeeda sidan; Aniga islaamku wuu i karaameeyey, Waxaan ahaa xoolaha oo kale islaamka ka hor, waxaan ku bixi jiray xorriyadayda, waxaan dhaxli jiray xoolaha ninkayga, waxaan maamuli jiray gaancsiyo waaway, waxaa la ii tirin jirin gabayo jacayl iyo amaana, waxaa dagaal loo...
Sideen ku ogaan karaa diinta saxda ah?
Waxa aan ahey qof Soomaaliya kuma hadlo carabiga seen ku ogaan karaa in diinta islaamku tahay diinta ugu saxan diimaha? Dadkayga miyaan dhinac ka raacaa ? Mise waxaa isaaran in aan ogaado saxnimada diinta aan qaadanayo?Midda hore haddii ay tahay laba arrimood middee weeye? Ma ilaahay ayaan ku raalli galinnaa mise dad ayaan ku raalli galinaa?Haddii ay tahay in aan ilaahay ku raalli galinayo saw...
Maxamed Cabdiwahaab waxa uu ku dhashay tuulada Cuyeyna ee aagga Najdi oo ka tirsan dalka maanta loo yaqaan Sacuudi Carabiya taariikhdu markii ay ahayd 1703. Waxa uu diinta islaamka wax ka mid ah ku bartay tuuladaas uu ku dhashay, ka dibna waxa uu waxbarashadiisa ka sii watay Maka iyo Madiina. Dabadeed waxa uu aqoon-kororsi u aadey magaalada Basra ee dalka Ciraaq. Xilligii uu Ciraaq joogey waxa uu...
Boggii Hore 1 … 13 14 15 16 Bogga Xiga